यो आईपीएल मेरा लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ  : सन्दीप लामिछाने- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
यो आईपीएल मेरा लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ  : सन्दीप लामिछाने
‘अर्को वर्षको आईपीएलमा यथावत् रहन मैले राम्रो प्रदर्शन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले म सामान्य, नम्र बनेर आफ्नो प्रदर्शन सुधार्नमा ध्यान दिइरहेको छु ।’
काठमाडौँ — नेपाली स्पिनर सन्दीप लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) खेलेर इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) खेल्न दुबई पुगिसकेका छन् । सन्दीप सेप्टेम्बर १४ (सोमबार) दुबई पुगिसकेका छन् । दिल्ली क्यापिटल्सले किंग्स इलेभेन पन्जाबसँग आइतबार दुबईमा पहिलो खेल खेल्दै छ ।
सन्दीपले सुरुका ६ दिन दुबईमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ को प्रोटोकलअनुसार यूएईमा तीन पटक परीक्षण अनिवार्य छ । यूएईमा पुगेपछि एयरपोर्टमा पहिलो परीक्षण, त्यसपछि ६ दिने आइसोलेसनको पहिलो, तेस्रो र छैटौं दिन परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यी सबै परीक्षण पार गरेपछि मात्र प्रशिक्षण सुरु गर्न र खेल्न पाउने प्रावधान छ । सन्दीपको यी सबै परिक्षण शनिबारमात्र सकिनेछ ।
यसै सन्दर्भमा सन्दीप लामिछानेसँग कान्तिपुरका लागि विनोद पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
यसपालि सीपीएलमा राम्रो प्रदर्शन भयो, यसको कारण के जस्तो लाग्छ र यसले आईपीएलमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?
सीपीएल एकदमै राम्रो भयो, म यसमा निकै खुसी छु । कोरोनाको महामारीको बेलामा आउने प्रतियोगितालाई मैले आफूलाई मानसिक रूपमा निकै तयार बनाएको थिएँ । पहिला लगातार भ्रमण र खेलहरूमा निकै तनाव हुन्थ्यो ।
त्यो सायद त्यो तनाव कम भएर फ्रेस सुरुआत गर्न सकें । सीपीएल जानुअगाडि नेपालमा मैले मेरो अन्तिम पत्रकार सम्मेलनमा एउटा फ्रेस सुरुआत हुनेवाला छ, केही राम्रो नै हुन्छ भनेको थिएँ । यही कारणले पनि हुनसक्छ मैले सीपीएलमा राम्रो प्रदर्शन दिन सकें । आईपीएलमा पनि निकै आत्मविश्वाससाथ जाँदैछु । सकेसम्म आफ्नो तर्फबाट दिने सबै प्रयास म गर्नेछु र सीपीएलभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्न खोज्ने छु ।
भारतको विकेटको तुलना गर्दा यूएईको विकेटले बलरलाई सहयोग गर्ने गरेको छ, यसमा कति सहमत हुनुहुन्छ ?
निश्चय पनि भारतको विकेट तुलनामा यूएईको विकेट बलरलाई नै सहयोग गर्छ । भारतमा मैले त्यति धेरै खेलेको छैन, आईपीएलमा त्यही ९ खेल खेलेको हो । यूएईमा चाहिँ मैले धेरै खेल खेलेको छु ।
यूएईमा धेरै खेलेको हुनाले विकेट र कन्डिसनबारे थाहा छ । हुन त भारतको बारेमा पनि थाहा छ, तर यूएईको विकेट चाहिँ स्पिनरलाई सहयोग गर्नेखाले छ । त्यसमा पनि आईपीएल यूएईको तीन मैदानमा मात्र खेलिरहेका छौं । पछि गएर विकेट स्लो हुँदै जान्छ र स्पिनरलाई फाइदा गर्दै जान्छ ।
दिल्लीमा स्तरीय स्पिनरहरू छन्, त्यसमा तपाईं आफ्नो सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
दिल्लीमा सबै एकदमै राम्रा स्पिनरहरू छन् । त्यसले मलाई केही अप्ठ्यारो पार्नेवाला छैन यदि म राम्रो खेल्न सक्षम छु भने । म खेल्न तयार छु । टिमको एउटा योजना हुन्छ र म त्यसैअनुरूप हिँड्नुपर्छ । कन्डिसन र आउने क्षणहरूमा धेरै कुरा भर परेको हुन्छ, कुन खेलाडी कति बेला खेल्छ भनेर ।
दिल्लीले उपाधि नै जित्ने लक्ष्य बनाएको छ, त्यसमा आफूलाई कहाँ देख्नुहुन्छ ?
टिमलाई हेर्नुहुन्छ भने दिल्लीको यो अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट टोली हो । लाइनअप हेर्ने हो भने पनि राम्रा ब्याट्सम्यान, राम्रा तीब्र गतिका बलर र स्किलफुल स्पिनर पाउनुहुन्छ । निकै सन्तुलित टोली छ । त्यसैले यो दाबेदार टोली बनेको छ धेरैका लागि ।
मलाई पनि यही लाग्छ । मैले आफूलाई एउटा स्पिनरका रूपमा जिम्मेवारी लिएर नै अगाडि बढिरहेको छु । विश्वभरका जति पनि फ्रेन्चाइज लिगमा मैले खेलेको छु, त्यो अनुभव बोकेर आईपीएलमा खेल्नु छ
दिल्लीसँग तपाईंको सम्झौतामा यो तेस्रो र अन्तिम वर्ष हो, त्यसैले आउँदो सिजनका लागि यो आईपीएलको महत्त्व कति छ जस्तो लाग्छ ?
दिल्लीसँग सम्झौताअनुसारको मेरो अन्तिम वर्ष हो, यो यात्रा निकै रमाइलो भयो । आउने सिजनको आईपीएलका लागि पनि यो आईपीएल मेरा लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अर्को वर्षको आईपीएलमा यथावत् रहन मैले राम्रो प्रदर्शन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले म सामान्य, नम्र बनेर आफ्नो प्रदर्शन सुधार्नमा ध्यान दिइरहेको छु ।
प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ १०:१०
८२ हजार ६६ जनाको मृत्यु, ३९ लाखभन्दा बढी निको भए
काठमाडौँ — भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५० लाख नाघेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ९० हजारभन्दा बढीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या ५० लाख नाघेको हो ।
भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार मात्रै थप ९० हजार १ सय २३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । मंगलबार साँझसम्मको तंथ्याकअनुसार भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ५० लाख २० हजार ३ सय ५९ पुगेको छ ।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट थप एक हजार २ सय ९० जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८२ हजार ६६पुगेको छ ।
भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतमा करिब ७८.५३ प्रतिशत संक्रमित निको भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै भारतमा थप ८२ हजार सय ६१ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । भारतमा अहिलेसम्म ३९ लाख ४२ हजार ३ सय ६० जना निको भएका छन् भने करिब ९ लाख ९५ हजार संक्रिय केस रहेका छन् ।
भारतमा पछिल्लो समय परीक्षणको दायरा बढाएसँगै संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद्(आईसीएमआर)का अनुसार मंगलबार ११ लाख १६ हजार ८ सय ४२ नमुना परीक्षण भएको छ । भारतमा मंगलबार साँझसम्म ५ करोड ९४ लाख २९ हजार १ सय १५ नमुना परीक्षण भएको छ ।
कोरोना संक्रमणका हिसाबले भारत विश्वमै दोस्रो प्रभावित मुलुक हो । कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा बुधबार बिहानसम्म ६६ लाखभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । अमेरिकामा हालसम्म एक लाख ९५ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने करिब २५ लाख निको भएका छन् ।
त्यसैगरी बुधबार बिहानसम्म विश्वभर दुई करोड ९४ लाखभन्दा बढीमा कोरोना पुष्टि भएको छ भने ९ लाख ३३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये करिब २ करोड बढी निको भइसकेका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ १०:०५